Madaafiicdii ugu adkeyd oo ka socoto Jiida dagaalka & Taliska guud ee Gambara oo holcaya – Puntlandtimes
Madaafiicdii ugu adkeyd oo ka socoto Jiida dagaalka & Taliska guud ee Gambara oo holcaya
TUKARAQ(P-TIMES)- Wariyaasha kusugan duleedka magaalada Tukaraq ayaa sheegaya in hubka culus ay si toos ah labada dhinac ee Puntland & maamulka la baxay Somaliland isku garaacayaan, waxaana la adeegsanayaa wax kasta oo ay qolo kasta awoodo.
Hubka culus ee ciidamada Difaaca Puntland ayaa garaacaya Saldhigyada ugu waa weyn ee ciidamada maamulka Hargeysa, gaar ahaana goobaha Higlada & Gambara oo labaduba ah meelaha ugu waa weyn ee ay saldhigyada ku leedahay Somaliland.
Wariyaha Puntlandtimes ee kusugan Jiida dagaalka ayaa sheegaya in uu arkayo hubka labada dhinac oo si toos ah iskugu ridayaan, ciidamada Lugta ayaa meelaha qaarkood hadda ka bilaabay rasaas toos ah oo ay isku bilaabeen.
Ciidamada Galbeedka Tukaraq ka dagaalamaya ee Puntland oo shalay guul dagaal gaaray, ayaa hadda wajahaya maleeshiyaadka ugu badan ee Somaliland, waxayna xooga saarayaan sidii ay u qabsan lahaayeen Buundada ka shisheysa Gambara oo ay galbed uga dhaw yihiin, sidda ay warar madax banaan sheegayaan.
Puntland ayaa doonaysa in ay xoreyso dhulka ay Somaliland qabsatay 11 sanno kahor, waxaana ka go’an in ay qaado talaabo Milateri oo dhameystiran, xili shalay la rumeysan in aysan dagaal rasmi ah galin ciidamada Difaaca ee Puntland.
SI AAD UHESHO XOGT AU DAMBEYSA RIIX HALKAAN
c/weli inamdiizu izaga ciyaarayaa kulahaa laascanoodpan qapsanyaa hhhhhhhhwlhi inaydaan weligiin taako ka zoo ceshanyn isaaaq tukaraqan aad ku cabaaadaysaan maalin cadbaa laydin ka dareeriyay idinkoo qashar ku ridinwaaar meesha inamadiinii ayaa kudhamady c/weli wxn leeeeyahy “adigupa c/welow caqli waad leeedee carar maxa dhaama”ama doorasho ku gal ama ku kordhiso maaalinta gorowe xabadu ka dul dhacdo mar marsiiye haka dhigan shirkii qaranbaan ku maqnaaamuuse xabada kulaylkeeda waa nin soo arkee qurbo jooogiinan yar yaaany hafaaaaydu ka luminxaqiiqadu wey cady cadceeedna sacabo laguma celin karowar masaaakinta gorowe joooogta inta leediin laascanood aya la qabsaday yaaany gorowe ka bilaaaban
walaaalyal isaaq hore ayad u taqaaaneene ma maaaantad baranaysaaan
galmudugoo 2 sano jirtay ayaa jilbaha dhulka idinku dhuftay moorgan maantan inamdiisa ku ciyaaaraynaaye hana daaawado m.muuse biihina balan buu galay tii awoowyashood lagu dhigay inuu dib u xasuusin dooono
balantu waaa gorooowe
“adigupa c/welow caqli waaad leeede carar maxaa dhaama”
Ninkaan wiil laascaano la baxay ma ahan dhulbahante ee ogaada waa munaafaq idoor ah
waaar anigu iidooor myhi indrw ee wxn la yaaabay beentan aad meesha ku soo qoraysaaan ee wax rag u cuntama meesha kusoo qora beentan intaa leeeg ban la yaaabay waaar adigu web ayad wax ka akhriyaysaa ee anagu toos baanu u jooogna beentad run moodysaane
Waxaan Idin Leeyahay Reer Putland,cabaadka iska daaya Waa Laydin Hayaa Cida Idinhaysana Waa Garanaysaan Waa S/land Nimankii Qoodha Ahaa
waxaan kayaabay dadka isaaq ku abtirsada caqli xumadooda war waxa idinla dagaalamaya harti ma ahane waa in yaroo mj ah tukaraq waa laidinka qapsaday oo waa la laayey wiilashii aad soo dirsateen guul ciidankeena difaaca guul
waar hooy kuwa waxaan foosha xun oo beenta qorayooow xishooda. cidamada puntland ma maleesiyooyin bay ka adkaan kari la’yihiin. haddaay sida aad sheegaysaan tahay wax meesha kuma hayaan. adiga waxaa moodayey inay ciidamada rigliga ah ee somaliland ay la dagaalamayaan e. bal majeerteen waa aqaanaa oo intey is boxboxooraan bay marka dambena yaacaan e laascaanood iska dhaafe car yaan garoowe la idinka qabsanin
mstr frh osmn says:
wl mcn bnta ha lyska dyo rgu wa islaya wna la hesheya e wxn ine lyhy crurta yrka e dadka cyah inty hyadod afka u bxsy ay ine tre dadka so maaga